आऊ ! यो देशका नागरिकहरु मिलेर रबि लामिछानेलाई जेल हालौँ ! – Todays Nepal
नेपालीको मनमनमा बसेको नाम हो रवि ! आज कामले नाम कमाएका रबिको बारेमा धेरै राम्रा तर केहि औंलामा गन्न सकिने १-२ जनाले बिरोध गर्दैछन !
अध्यन गर्न अमेरिका भासिएको युवा देशका लागि केहि गर्छु भन्ने प्रण गर्दै नेपाल फर्कियो र ‘Buddha was born in Nepal’ भन्ने स्लोगनका साथ संसारको सबैभन्दा लामो टक सो गरेर गिनिज बुक्स अफ ओल्डमा नाम लेखायो ! र केहि गर्छु देशलाई केहि न केहि त दिन्छु भन्दै देश भित्रै सम्भावना खोजिरह्यो !
आज रबिलाई सरकार भन्दा ठुलो मान्नेहरु धेरै भएका छन कानुन, प्रशासन, अड्डा, अदालत, व्यवसायी, म्यानपावर देखी अरब देखि अमेरिकासम्मका नेपालिहरुले त्यहाँको कानुन भन्दा रबि बाट न्यायको आशा राख्दछन !
केहि मानिसहरुले बुझ्न नसकेको कुरा रबिका केहि सिमा मजबुरीहरु छन ! भलै यो देशमा अमेरिका बाट आएर देश टुक्राउछु भन्नेहरु पनि त छन तर जो देशको निम्ति भन्दै आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेर बरु मर्छु तर गरिवका आवाज बोल्न रोक्दिन भन्ने रबिकै बिरुद्धमा किन यस्तो ? आज रविको गर ! हिजो धुर्मुस र सुन्तली र जनार्दन, कुलमान लालबाबु पण्डित र प्रेम बानियाँहरुको बिरोध गर्नेहरु पनि थिए !
बरु आऊ नेपालीको मन-मुटुमा बस्न सफल सञ्चारकर्मी रबि लामिछाने लाइ जेल हालौँ ! अनि मुकुन्दे जस्तो अर्ध पागललाई प्रधानमन्त्री बनाउँ । सरकारले नगरेको काम गर्ने धुर्मुस सुन्तलीको बिरोध गरौँ ? जनार्दन कुलमान घिसिङहरुको पनि बिरोध गरौँ ! लालबाबु पण्डितहरु लाई पनि देश निकाला गरौँ ! आंककाजिहरुलाई सत्तासिन बनाउँ ! आखिर देशको सम्बृद्ध बनाउन हामीले त्यो भन्दा फरक के नै पो जानेका छौं र ?
हामि देशका नागिकता धारीहरुले यो देशका लागि के नै गर्यौ र ? खालि सरकारलाई गालि गर्न बाहेक घरको फोहोर लुकेर सडकमा फालेर सरकारले बाटोघाटो सफा गरेन भन्ने हामि नै हौला ! कसरी हुन्छ आफ्नो काम छिट्टो गराउन टेबुल मुनिबाट पैसा दिने पनि हामि नै हौला ! कसले बनाएको नेपालका कर्मचारीलाई घुसखोरी ? कसले दियो भ्रष्टाचारी नेताहरुलाई पटकपटक भोट ?न